भत्काउन जरुरी मनका छाउगोठ
अस्ति फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले ‘छाउपडी प्रथा दुई महिनाभित्र निर्मूल गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दियो । छाउपडी जस्तो अमानवीय परम्पराबारे चासो राखेर जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक हो ।
हामीकहाँ आयातित ‘प्रेम दिवस’को हल्ला धेरै हुने गर्छ । तर आफ्नै पूर्वीय दर्शनभित्रका कैयांै सुन्दर प्रेमकथाबारे अनभिज्ञ छौं । प्रेम दिवस अक्सर स्वस्थानी व्रत अवधिमा पर्छ । स्वस्थानी कथा एउटा आदिम प्रेमको अनुपम कथा पनि हो भनेर कमैलाई थाहा होला ।
प्रहरीले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको साढे चार महिनासम्म पनि बलात्कारी र हत्यारा फेला पार्न सकेको छैन । अनुसन्धानका नाममा पटकपटक समिति गठन गर्नेदेखि जोकसैलाई बलात्कारी र हत्यारा हो भन्दै समात्ने, थुन्ने र यातना दिने अनि फेरि ‘निर्दोष रहेको भन्दै’ छाडिदिने जस्ता कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
कुनै विवाहित पुरुष र अर्कै कुनै विवाहित महिलाबीच शारीरिक सम्पर्क हुनगई शिशु जन्मिए विवाहका रूपमा मान्य हुने कि नहुने ? सन्तानको दायित्व के हुने ?
समाजले मानवीय संवेदनाका सम्पूर्ण सीमा गुमाउँदै गइरहेको छ भन्ने कुराको पछिल्ला प्रमाण बनेका छन्, ललितपुर, इटहरी र दरबारमार्गमा भएका सामुहिक बलात्कारका घटना र यी घटनालाई निस्तेज पार्न न्यायिक निकाय र यससँग सम्बन्धित न्यायकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा समाजका ‘ठेकेदार’हरूले खेलेका भूमिका ।
२९ पुसको कान्तिपुरको तेस्रो पृष्ठमा भाइरल ज्वरोले थला परेर बाटोमै पल्टिएको जाजरकोटको एक बालक र केही पर रुमालले नाक छोपेर उसैलाई हेरिरहेकी एक बालिकाको तस्बीर छापिएको थियो ।